Ukulungiselela "Cefixime" analogs (isib, nomuthi "Maksibat") kukhona oyisizukulwane sesithathu cephalosporin-antibiotic nge isinyathelo amagciwane (ikhono uphazamise zamagama e odongeni cell -bacterium). Imithi kuthinte nezilwanyana ezincane ezahlukene aerobic kanye anaerobic, ezifana igremu-negative futhi igremu-HIV.
Bioavailability kusho ukungenisa 45%. Umuthi sibopha ukuthi plasma namaprotheni amaphesenti ayisithupha nanhlanu. Excretion (excretion) Kwenziwa ngo-50% ngo-izinso zinjalo. 10% excreted ku Bile. Umuthi lilondolozwe lokuhlala eliphezulu emchamweni, Bile futhi serum enkathini ende.
Umuthi 'Cefixime "Umhlahlandlela uncoma ezifeni Lokudabuka webhaktheriya kule aphansi kanye engenhla ipheshana zokuphefumula: ukucinana kwemigudu yokuphefumula, namathansela, sinusitis, pharyngitis. Umuthi kuboniswa ngenxa pathologies ezithathelwanayo ipheshana biliary, izicubu ezithambile, uhlelo urinary, isikhumba, nge otitis, isipatsholo ayinzima e wesibeletho kanye urethra, endometritis, osteomyelitis nezinye izifo ezihlobene nomsebenzi kwamagciwane singangena.
Medicine "Cefixime" imfundo iyakwenqabela aphoyintimenti izingane ngaphansi kwezinyanga eziyisithupha, iziguli abakhulelwe kanye lactating amakhulu, iziguli ezinemishini hypersensitivity kuya izingxenye. Ikakhulukazi ngokuqapha isibonisi ngenkathi ngokuthatha izidakamizwa kwasebekhulile, ebukhoneni nesifo (emlandweni kanye).
Kusho "Cefixime" imfundo manual incoma ukuthatha ngaphakathi. I umthamo wansuku zonke zomuthi iziguli eyishumi nambili (nge isisindo emzimbeni amakhilogremu ezingaphezu kwamashumi amahlanu) - angu angamakhulu amane kanye ngosuku, noma angu angamakhulu amabili kabili ngosuku.
Lapho nenqwaba isiguli esingaphansi wathi imithi kadokotela ngesikhathi umthamo angu kilogram per ezintathu ayisishiyagalolunye. Ngemva kwalokho, imithombo yezokuzijabulisa ingadlulisela Isikali lakhuphuka lafika ku-12 mg / kg.
Isikhathi lesi sidakamizwa "Cefixime" ngesilinganiso izinsuku eziyisikhombisa noma eziyishumi.
Ukuqeda isipatsholo ayinzima e wesibeletho kanye urethra ukhombe milligram umthamo ezine.
Izingane kuze kufinyelele eminyakeni eyishumi nambili ezinqunyiwe izidakamizwa ngefomu okwesikhashana. Umthamo lesi sidakamizwa "Cefixime" Umhlahlandlela incoma ukuthi ufake okulandelayo: kufika unyaka - 2.5-4 ml, ezimbili kuya eminyakeni emine - 5 ml, ezinhlanu kuya iminyaka eyishumi nanye - 6-10 ml. Akunikeze imithi njalo emahoreni nambili.
Ngokuba ukulungiswa ukumiswa kumelwe ukungezwa isitsha nge powder Amane namamililitha amanzi abilayo (ngezigaba ezimbili) anikine kuze kube iyunifomu (eyohlobo) ingxube. Khona-ke ukumiswa wavunyelwa ukuba ume imizuzu emihlanu. Ngaphambi kokufaka isicelo isitsha imithi kufanele ayonyakaziswa.
Okuvame kakhulu imiphumela engathandeki uma uthatha imithi ye-"Cefixime" iziyalezo enkeneneza ezindlebeni, imfiva, ukulunywa, iphika, isikhumba ngamanzi, isifuba, isiyezi, eosinophilia, leukopenia. Kwezinye izimo, kungase kube thrombocytopenia, neutropenia, goiter, anaemia hemolytic, candidiasis. Phakathi imiphumela emibi kufanele isicanucanu, ikhanda elibuhlungu, uhudo, stomatitis, hypovitaminosis B. Medicine "Cefixime" kuphawula kungabangela nephritis interstitial, ukuhlanza, nesifo pseudomembranous.
In iziguli elinomlando zazo kunobufakazi komzimba nezinto penicillins yingenxa ibonakalisa ukuzwela anda nemithi ye tsefaplosporinovogo chungechunge. Phakathi ukwelashwa kungase ukuthuthukisa okungelona iqiniso Coombs eqondile yokuhlola kanye nomchamo glucose.
Ngaphambi ukwelashwa kuyadingeka ukuze sifeze wonke ukuhlolwa ezidingekayo kumele sibukwe. Ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo "Cefixime" Kufanele ufunde imiyalelo ukusetshenziswa.
Umuthi 'norfloxacin ". Yokusetshenziswa
Umuthi 'Etamsylate' (amaphilisi). Yokusetshenziswa
"Pfizer" izidakamizwa. I "Ukunakekela Wena"
Kuyini MAC? Maximum lokuhlushwa kuvunyelwe izidakamizwa eziyingozi emoyeni
Indlela ukupheka amanzi dill for nosana? Amacebo eziwusizo
Stocking up amakhowe: indlela amanzi okugqumisa kubo ebusika?